Kwakhona akukho ayikwazi ongabotshwa neqabane umphefumlo? njani ukuba ongabotshwa njani?
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Kwakhona akukho ayikwazi ongabotshwa neqabane umphefumlo? njani ukuba ongabotshwa njani?
iqabane Mphefumlo, kuba oko ngamnye ezinye bathanda ngomphefumlo, naye rhoqo xa wadibana kuba ukutshata kunye nophuhliso njengoko ubudlelwane ukuba besini esahlukileyo. Noko ke, iqabane umphefumlo ngokuyimfuneko liqabane lomtshato.
iqela isiphelo ukuba Meguria 'amaxesha amaninzi kubomi ezidlulileyo ibiya kuba phambi kokuba iziko lomtshato lusekiwe. Ngenxa yesi sizathu, iqabane umphefumlo nazo babecinga ukuba akukho iqabane lomtshato nozilingana.
Ukongeza, ukuba enye idityaniswe amaqhina ezinzulu, abanye abantu musa ethile malunga uhlobo lomtshato. Ngaba kunokwenzeka ukuba ukuhlangabezana iqabane umphefumlo okukhulu ukuba isiphelo sele itsale, nokuba ukuphuhlisa ukusuka apho ukuya umtshato yeyona phezulu kuwe.
ukuba ngokupheleleyo ukuba ufuna ukutshata liqabane umphefumlo, kubalulekile ukugcina ngokucinezela kwindawo eziyimfuneko ukulungiselela loo njongo. Ngo
ukuze sidityaniswe kunye neqabane umphefumlo
, ukuba abe ukuba ibotshelelwe neqabane umphefumlo, yintoni na ingongoma kuni?
? iqabane umphefumlo
iqabane umphefumlo ayingomntu omnye umntu wakha ulwalamano nzulu kubomi bangaphambili, naye lo mntu utyikitye ixesha ngalinye ibhondi nzima xa utshintsha ubuhlobo. Ubudlelwane kwakhona ukongeza eso sibini ukuba intsapho okanye umhlobo osenyongweni, imbangi. Ngenxa yesi sizathu, iqabane umphefumlo akuthethi umntu omnye. Ngoko le nto kungekho mntu nazo okanye ngoku ubomi.
? iqabane umphefumlo ukubamba kuqubisana aura
ukuba ukuhlangana xa iqabane umphefumlo ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ixesha xa indlela yabo yokuphila iye ibe eyakhayo ezingenamandla. Ngokomzekelo, ndafumana kunomvuzo, ezifana umsebenzi kunye ukuzenza, ezifana weza umngeni ngendlela eyahlukileyo yaye kude kube ngoku, lixesha lokuba ivele into samandla ngokwakho. Makhe ukubamba ukuze kufunyanwe izihlabo enjalo.
iqabane umphefumlo ukuba uyazi ukuba elidityaniswe nishube _-umlingane ubudlelwane olukhula nabanye Polish ngamnye umphefumlo omnye komnye. Xa wadibana nabantu ababonakala liqabane umphefumlo, masenze wazi ukuba wambhinqisa abantu ngengqondo kakhulu. Kugxininiswa kulwalamano zokomoya kunokuba nobuhlobo emzimbeni, kwaye banxibe nemvo yokutshintshiselana amandla nganye enye, ungenza nangakumbi izitropu.
? Xa udibana ne ngenyameko
umphefumlo iqabane ababonakalayo zaguquka, kuthiwa ukuba kukho abaninzi xa emi phezu zaguquka ebomini bam ndihamba. Ngelo xesha okanye amandla ngoceliweyo ukuba, umntu lowo okanye kuphekwe ithuba ukutshintsha kakhulu indlela ukuhamba ukususela ngoku ukuya phambili, ukuze kunikezwe umtshato ngokunzulu yokomoya, kuba zininzi ipatheni ukuba siqhubeke sihamba kunye kudala watshata kuyinto. Xa kuvela umntu batshintsha ubomi bam, nceda banethemba ulwalamano.
amandla kusoloko omhle tanki elizeleyo ukuze ugcine
soulmate, amaxesha amaninzi ukusuka kubomi edlulileyo kwaye edlulileyo iqabane liye ngokuphindaphindiweyo Ekuhlanganeni, ulwalamano phakathi kwezinye otsaleleke ngamandla ngomphefumlo. Kodwa ke, ukuba wena akukho kwimeko abatyedi amandla komphefumlo ngokwaneleyo, loo nto kwakhona ukuba iqela umphefumlo lingenako ukubamba ezabo.
Ngoko, kuba usoloko entle kubomi bemihla ngemihla, bekuya kuba kubalulekile ukutsala iqabane umphefumlo ukugcina amandla ngokupheleleyo.
Xa udibana neqabane x000D_ umphefumlo, kuthiwa ukuba kukho abaninzi xa emi phezu zaguquka ebomini bam ndihamba. Ngelo xesha okanye amandla ngoceliweyo ukuba, umntu lowo okanye kuphekwe ithuba ukutshintsha kakhulu indlela ukuhamba ukususela ngoku ukuya phambili, ukuze kunikezwe umtshato ngokunzulu yokomoya, kuba zininzi ipatheni ukuba siqhubeke sihamba kunye kudala watshata kuyinto. Xa kuvela umntu batshintsha ubomi bam, nceda banethemba ulwalamano.